သူ့ကိုဖြုတ်ချလိုက် ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေ သိရင် ရူးသွား လိမ့်မယ်လို့ ဆိုကာ ဝင်ငွေဘယ်လောက် ရှိကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ ဆယ်လီနေဆန်း…. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သူ့ကိုဖြုတ်ချလိုက် ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေ သိရင် ရူးသွား လိမ့်မယ်လို့ ဆိုကာ ဝင်ငွေဘယ်လောက် ရှိကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ ဆယ်လီနေဆန်း….
သူ့ကိုဖြုတ်ချလိုက် ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့သူတွေကို သူ့ဝင်ငွေ သိရင် ရူးသွား လိမ့်မယ်လို့ ဆိုကာ ဝင်ငွေဘယ်လောက် ရှိကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ ဆယ်လီနေဆန်း….
ဖ့စ်ဘုတ် ဆယ်လီနေဆန်းကတော့ ..သူများနဲ့မတူတမူ ထူးခြားတဲ့ ..ဟာသလေးတွေတင်ဆက်ရင်းလူသိများလာခဲ့တဲ့သူတ စ်ယောက် ပဲဖြစ် ပါတယ်။..လှပတဲ့မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့်လူအများရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ..ထို့ ပြင် နေဆန်းက ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကြောင့် ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေများဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သော အိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနိုင်လာခဲ့ပါတယ်
နေဆန်းက.. လက်ရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာ ပါတဲ့အလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိ ဆွတ် ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.. နေဆန်းကလည်း သူ့ရဲ့အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ ..မနားပဲ ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ လုပ်ကိုင် နေလျက်ရှိပါတယ်။
နေဆန်းဟာ.. အာဏာသိမ်းခံထားရတာ တောင်မှ.. ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ …အပြစ် တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ် မကြာသေးမှီကပဲ… နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်င န်းရှင်များက ပရိတ်များ တောင်းဆိုချက်အရ
နေဆန်းနှင့် …ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကြော်ငြာများ ပိုစတာများ ကို ဖျက်ခဲ့ပေးပြီးဖြစ်ကြောင် းတောင်းပန်စာ….များရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ နေဆန်း အပါအဝင်… ဖြူဖြူထွေးဟာလည်း ယနေညတွင် ကြော်ငြာများဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။
နေဆန်းဟာ ယခုသူရဲ့… အကောင့် Mydays မှာ ပြည်သူများ ကိုကျေးဇူးကန်းသော…စာသားများကို တင်ထားတာတွေ့ရပ်တယ်… သူတင် ထားတဲ့ စာတွေကတော့…
“အော် ပျော်နေလိုက်ကြတာ ထိုင်းဘက်မှာ ငါငွေတွေ ဘယ်လိုငွေတွေ ဝင်နေလဲဆိုတာ သိသွားရင် ရူးသွားမယ်…ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေ ကြောင့် အလုပ်လုပ် ဖို့ မပျင်းတော့ဘူး ညဘက် ထိုင်းဘက်က အလုပ်လာအပ်တာ သိန်း 100 ကျော်”…
ထို့အပြင် နေဆန်းက မြန်မာတွေ အားမပေးလဲ ..ထိုင်းဘက်က ပရိသတ်များ နဲ့… ထိုင်းရောက်မြန်မာ ပရိသတ်တွေ အခိုင်မာ ..ရှိကြောင်း သူတို့နဲ့ပဲ …အလုပ် ဆက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ် ရေးသားခဲ့ပါတယ်…
သူရေးသားခဲ့တာကတော့ ထိုင်းဘက်မှာ Video တင်ဖို့ ..သိန်းထောင်ချီတန်.. စာချုပ်များ ချုပ်လိုက်ပြီး ထိုင်းသူဌေးမတွေ ရော သူ့အားပေးတဲ့ ..ထိုင်းက ..ပရိသတ်များကိုလဲ ကျေးဇူးတင် စကားပြောခဲ့ပါတယ် ဒါတင်မကသေးပဲ…. ဝေဖန်သူများ ဆွေ့ ဆွေ့ခုန်သွားအောင်သူ TikTok ဆော့ ဖို့ရယ် Video…
ရိုက်ကူးဖို့ အတွက်ေ နာက်ထက် …သိန်း 4000 တန်ဖိုးရှိသော အလုပ် အိမ် အသစ်တလုံး ဆောက်နေကြောင်းကိုလဲ …တစ်ခါထဲ ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့တာပါနော်…. နေဆန်း အပေါ်အမြင်လေး ကိုလည်း မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်းနော်။
Previous post ရေကူး ကန် ထက် မှာ အတွင်း သား အလှတွေ ကို လှစ် ဟ ပြသ လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ
Next post အတွင်းသား ကို ထင်းလင်းစွာ မြင်တွေ ရမယ် ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ